fun – စာမကျြနှာ4– Healthy Life Journal
အဒေါ်ဖြစ်သူက ဆံပင်ညှပ်သင့်၊ မညှပ်သင့် တွေဝေနေတဲ့ တူမဖြစ်သူကို အကြံပေးနေလေသည်။ “ဘာလုပ်ရမလဲ ဆုံးဖြတ်ရခက်နေရင် အကောင်းဆုံးနည်းကတော့ ကိုယ့်ယောက်ျားကို မေးကြည့်လိုက်သင့်တယ်။ ဘယ်လိုကြောင့် ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ အမြင်ကိုလည်း မေးဖို့လိုတယ်။ သူ့ရဲ့အဖြေက အကြောင်းအကျိုးခိုင်လုံ၊ မခိုင်လုံသေချာမေးရမယ်။ ပြီးတော့ သူပြောသမျှကိုပဲ နားယောင်မနေနဲ့ ....
ပုံမှန်ပါပဲ . . .
စကားလက်ဆုံကြနေသော အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီး ယောက်ျားတစ်ယောက်က နောက်တစ်ယောက်ကို ပြောနေသည်။ “ ခင်ဗျားမိန်းမ စကားပြောတဲ့ပုံက ပြုံးရွှင်ပြီး သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ဗျာ… ကျွန်တော့် မိန်းမကိုကြည့်ပါဦး စိတ်မပါလက်မပါ ပုံစံကြီးနဲ့ . . .” “ ဒီလိုပါပဲဗျာ . . ....
အိမ်ပြန်မယ့် ကားမှတ်လို့ . .
အရက်သမားတစ်ယောက် အရက်မူးမူးနဲ့ ဘတ်စ်ကားပေါ်တက်လာပြီး အမျိုးသမီးကြီး တစ်ယောက်ဘေးမှာ ထိုင်လိုက်သည်။ အမျိုးသမီးကြီးက အရက်သမားကောင်လေးကို ကြည့်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲကြီးစွာ ပြောလိုက်သည်။ ” ဒီကောင်လေးကတော့ ငရဲပြည်ကို တန်းတန်းကြီး ရောက်သွားမှာပဲ ” အရက်သမား ဗြုန်းခနဲ နေရာကထပြီး ကားသမားကို အလန့်တကြား...
ဆရာဝန်ထံသို့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ရောက်လာသည်။ ” ကျွန်မ အဆီကျဆေးလိုချင်လို့ပါ။ တစ်ကယ်ထိရောက်ပြီး အဆီကျစေမယ့် ဆေးလေးညွှန်ပေးပါဆရာရယ်” ” တကယ်ထိရောက်တဲ့ ဆေးတော့ရှိတယ်ဗျ၊ ဒါပေမဲ့ ဆေးညွှန်းအတိုင်း တိတိကျကျလိုက်နာနိုင်မှ ထိရောက်တာ” ” အဆီသာတကယ်ကျမယ်ဆို လိုက်နာနိုင်ပါတယ်ဆရာ” ” ဟုတ်ပြီဗျာ..ဒီလိမ်းဆေးကိုယူသွား၊ အရင်ဦးဆုံး...
စိတ်ကျေနပ်အောင် ပြောပေးနေကျ . . .
အပြင်က ပြန်လာသော မိန်းမကို ယောက်ျားဖြစ်သူက မေးသည်။ “ဘယ်ကပြန်လာတာလဲ မိန်းမ” “အလှပြင်ဆိုင်က” “အော်. . . ဒါကြောင့် ငါ့မိန်းမ မျက်နှာက ဖြူဝင်းပြီး ပိုကြည့်ကောင်းနေပါလားလို့တွေးနေတာ” “ရှင်ဘာမဟုတ်တာလုပ်ထားပြန်ပြီလဲ . . . ဆိုင်ပိတ်နေလို့ ဘာမှမလုပ်ခဲ့ရဘူးရှင့်”...
အဖေတူသား . . .
အရက်ခိုးသောက်နေတဲ့ သားကို မိခင်ဖြစ်သူတွေ့သွားတဲ့အခါ ထိတ်လန့်တကြား ဆူလိုက်ပါတယ်။ “ ဘုရား ဘုရား . . . တစ်အိမ်လုံး ဘယ်သူမှမသောက်တဲ့ အရက်ကို နင်က ဒီအရွယ်လေးနဲ့ သောက်နေတယ်ပေါ့လေ . . နင့်အဖေသိသွားရင် ဘယ်လိုနေမလဲ” “...
အ၀လွန်နေတဲ့ အမျိုးသမီးနှစ်ယောက် စကားလက်ဆုံပြောနေကြသည်။ “ကျွန်မ မနေ့က ၀ိတ်ချဖို့အတွက် ပထမဆုံး ခြေလှမ်းအနေနဲ့ အိမ်မှာရှိတဲ့ အသင့်စာတွေ၊ အချိုတွေနဲ့ အဆီတွေများတဲ့ အစားအစာတွေ အကုန်ရှင်းထုတ်လိုက်တယ်. . .” “ တယ်ဟုတ်ပါလား. . . အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ ဘာတွေထူးလာလဲပြောပါဦး...
လူနာအဒေါ်ကြီးရဲ့ ဆေးစစ်ချက်တွေကို လက်ထောက်သူနာပြုလေးက မှတ်တမ်းတင်နေလေသည်။ ” ကိုယ်အလေးချိန်က ၁၄၄ ပေါင်တောင် ဖြစ်နေပါလား . . . ဆရာတော့ဆူတော့မှာပဲ နောက်ဆုံး အလုံး လေးလျှော့ပြီး မှတ်ပေးပါလား ဆရာမလေးရယ်. . နော်...
“ မိန်းမရေ . . ညနေ ငါ့အတွက် ၀က်သား ဟင်းလေးချက်ပေးထားပါလားကွာ..” “ ၀က်သားတွေစားတာများရင် သွေးထဲမှာ မကောင်းတဲ့အဆီတွေ များတတ်တယ်တဲ့…” “ ဒါဆိုလည်း ကြက်အူချောင်းလေးဖြစ်ဖြစ် ကြော်ပေးပါလား . . .” “ ကြက်အူချောင်းက...
လူတစ်ယောက် အမောတကော ချွေးသံရွှဲရွှဲနဲ့ အငှားယာဉ်ပေါ်တက်လာပြီး ကားသမားကို ပြောလိုက်သည်။ “ စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံကို အမြန်သာမောင်းပေတော့ ကားဆရာရေ . .”ခဏအကြာတွင် ခရီးသည်က ကားသမားကို ထပ်ပြောသည်။ “ ကျွန်တော့်ကို ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့် လုပ်မနေပါနဲ့၊ ကားကိုသာသေချာ မောင်းပါဗျ. ....